သူမ အမေကို ” ငွေလိုရတီ ” လို့ ခေါ်နေကြတဲ့အပေါ် ပြတ်ပြတ်သားသား ပြောလာတဲ့ ငွေမှုံရတီ – Swel Sone News – NEW
သူမ အမေကို ” ငွေလိုရတီ ” လို့ ခေါ်နေကြတဲ့အပေါ် ပြတ်ပြတ်သားသား ပြောလာတဲ့ ငွေမှုံရတီ
နိုင်ငံကျော်သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးချောလေး ရွှေမှုံရတီ ရဲ့ ညီမဖြစ်သူ သရုပ်ဆောင် ငွေမှုံရတီဟာ ဆိုရင် သရုပ်ဆောင်ပီပြင်ပြီး ကျရာဇာတ်ရုပ်ကို သရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ သူလေးပါ။ သူမသရုပ်ဆောင် ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဇာတ်ကားများစွား ရှိတာကြောင့်လည်း သူမကို ချစ်ခင်အားပေးတဲ့ ပရိသတ်အခိုင်အမာရရှိထားသူလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ ပရိသတ်တွေအတွက် ငွေမှုံရတီ က သူမ မိခင် နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောထားတဲ့ အကြောင်းကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော် ။
ငွေမှုံရတီ က အစ်မဖြစ်သူ ရွှေမှုံရတီလိုပဲ သရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာ ထူးချွန်သူလေးပါ။ ချောမောလှပတဲ့ မျက်နှာကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ငွေမှုံရတီက ခုဆိုရင် အနုပညာလောက ရဲ့ အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းပေါ်မှာ လျှောက်လှမ်းနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်၊
ဒီနေ့မှာတော့ ငွေမှုံရတီ က သူမရဲ့ မိခင်ကို ရင်းနှီးတဲ့ သူများက ငွေလိုရတီ လို့ စနောက်ပြီးခေါ်ကြ တဲ့သူတွေ ရှိသလို မီဒီယာ တစ်ခုက ပါ ငွေလိုရတီ လို့ ဖော်ပြထားတာကြောင့် အခုလို ပြန်ပြောထားပါတယ်။
ငွေမှုံရတီ က ” ကဲတခုလောက်ပြောချင်ပါတယ်ကဲအမေရဲ့နာမည်က? ဒေါ်မော်မော်ခိုင် ?ပါ ? ငွေလိုရတီ ?ဆိုတာခင်မင်ရင်းနှီးတဲ့သူတွေချစ်စနိုးနဲ့ခေါ်စနောက်ကျတဲ့နာမည်ဖြစ်တာကြောင့် media တွေမှာ နာမည် caption ရေးမယ်ဆိုရင်နာမည်အရင်းရေးပေးကျပါလို့တောင်းဆိုပါတယ် ” ဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။
သရုပ်ဆောင် ငွေမှုံရတီ က သူမ မိခင် ရဲ့ နာမည် အရင်းကို သုံးကြဖို့ပြောထားတဲ့ အကြောင်းကို သိလောက်ပြီ ထင်ပါတယ်။ ကြည့်ရူပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။
ခြိမ့်ကေကိုနဲ့ မယ်သခင်တို့နှစ်ယောက် အတူဆော့ကစားထားတဲ့ အခွီ Tik Tok ဗီဒီယိုလေး
သမီးလေးက မြိုမချနိုင်ဘူး ပိုက်နဲ့သွင်းရတယ်လို့ ပြောလာတဲ့ အဆိုတော်ငယ်ငယ်
လိမ်လည်လှည့်ဖြားခဲ့တာကြောင့် ချစ်သူနဲ့လမ်းခွဲလိုက်ပြီဆိုတဲ့ နန်းစု
ရိုက်ကူးရေး လုပ်ရင်း ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့တဲ့ MRTV4မင်းသမီးလေး ဆောင်းဝတ်ရည်မေ
ချစ်သူနဲ့အတူ နားရက်ယူပြီး ဖူးခက်ကမ်းခြေကို အပန်းဖြေခရီးထွက်နေတဲ့ နေခြည်ဦးတို့စုံ ရဲ့ ဗီဒီယိုလေး
ခရီးသွားနေပြီး ပစ်ထားမိတာကာ ငိုမဲ့မဲ့လေးဖြစ်နေတဲ့ သားလေးတွေရဲ့ မျက်နှာကြောင့် ရင်ထဲမရှိအောင်ခံစားရတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ
ချစ်ဇနီးလေးရွှေမှုံရဲ့ အသက် ၂၁ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာ ရိုဆန်လွန်းတဲ့ Birthday Surprise လုပ်လိုက်တဲ့ ရွှေထူး
ချစ်ဇနီးလေးရဲ့ (၂၁)နှစ်ပြည့် မွေးနေ့အတွက် အသေးစိတ်ကအစ သေသေချာချာ စီစဉ်ထားခဲ့တဲ့ ရွှေထူး